Fa maninona no mandeha any Alaska amin'ny ririnina?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fa maninona no mandeha any Alaska amin'ny ririnina?
Desambra 30, 2018
Ny fanjakan'i Etazonia any Alaska dia fantatra fa toerana be mpitia amin'ny fahavaratra. Fantatry ny besinimaro fa mangatsiaka be sy maizina ny ririnina amin'ny ririnina, saingy amin'izao fotoana izao dia tsy manakana ny mpitsidika ny drafitra hanampiana an'i Alaska amin'ny drafitra fitsangatsangan'izy ireo.
Ny Anchorage Daily News dia nitatitra fa ny isan'ny mpitsidika dia nitombo 33 isan-jato nandritra ny fararano sy ny ririnina tao anatin'ny 10 taona lasa.
Ny orinasan'ny ririnina dia niasa tao amin'ny Railway Alaska tao anatin'izay taona vitsy lasa izay. Ny mpandeha amin'ny lamasinina any Alaska dia nitombo 33 isan-jato teo anelanelan'ny ririnina 2015-2016 sy ny taona manaraka.
Ny lalamby dia nanampy serivisy fiaran-dalamby bebe kokoa handraisana ny fangatahana betsaka kokoa. Ireo mpitsidika avy any Azia dia mamandrika lamasinina hatrany hatrany.
Ny tompon'andraikitra misahana ny fizahantany any Alaska dia mampiroborobo ny fitsangatsanganana amin'ny ririnina any amin'ny fanjakana amin'ny filazany: Ny ririnina any Alaska dia fotoana manokana feno fety, fampisehoana ary fotoana tsy misy farany any ivelany. Raha vantany vao latsaka ny felam-panala voalohany dia manomboka mikorisa kely i Alaskans mba hivoaka sy hilalao!
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro, ny Alaska dia tsy voafehin'ny andro mangatsiaka na fohy kokoa. Mitondra ny ririnina fety, hazakazaka ski, fitsangatsanganana alika amin'ny alika, jiro avaratra mijery, Skizy avaratra, manao ski ambony midina, bisikileta amin'ny ririnina, akanjo milomano, snowmobiling, toerana kanto, patinazy ambony gilasy, doro afo, fanjonoana ranomandry, fisakafoanana ary fiantsenana.
Ny Alaska.org dia maniry alina lava kokoa hivadika ho mpizahatany ary hampiroborobo ny “Ski by moonlight”
Ny fizahan-tany Taiwan dia mifarana amin'ny taona 2018 amin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany 11 tapitrisa
Ivon-toeram-pisotro Amerikanina: tongava any Utah hiala sasatra, miala vonjy